बी र सी डिभिजन लिगमा बहुमतकाे संकेत नदेखिएपछि घोषित चुनाव स्थगित - Gandaki Khabar
आज यूएईविरुद्ध खेल्दै नेपाल
श्रीलंकाविरुद्धकाे टी-२० शृंखलामा अष्ट्रेलिया विजयी
मछिन्द्र र श्रीलंकाको ब्लु स्टारबीचको खेल दशरथ रंगशालामा साझमा हुने
लामा टेन्डी स्मृति बास्केटबल हुने
भोली देखी सिनेमा हल खुल्ने
‘नेपाल म्युजिक एन्ड फेसन अवार्ड’को तयारी
नम्रता श्रेष्ठको कथामा ‘वरदान’
बी र सी डिभिजन लिगमा बहुमतकाे संकेत नदेखिएपछि घोषित चुनाव स्थगित
-गण्डकी खबर	 -२६ माघ २०७८, बुधबार १४:११ 0
काठमाडौं, २६ माघ। अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)को आगामी १५ जेठमा चुनाव मिति तय भएसँगै विभिन्न घटनाक्रम बाहिरने क्रम सुरु भएको छ ।
एन्फाले जेठमा हुने चुनावका लागि आज (बुधबार) सहिद स्मारक ‘बी’ डिभिजन र ‘सी’ डिभिजन क्लबको प्रतिनिधि छनोटसहित मताधिकारका लागि चुनाव गर्ने कार्यतालिका थियो । तर अन्तिम समयमा आएर निर्धारित कार्यतालिका स्थगित भएको छ ।
‘हिजो साँझसम्म आज चुनाव गर्ने भन्ने कुरा थियो । तर अहिले स्थगित भयो भन्छन् । बी डिभिजन संयोजकलाई केही पनि थाहा छैन । सबै आफूखुसी कार्य गर्दै भएका छन्,’ रानीपोखरी कर्नर टिम (आरसीटी) का प्रतिनिधि तथा बी डिभिजन लिगका संयोजकसमेत रहेका कुमारराज भण्डारीले न्युज कारखानासँग भने ।
यसअघि एन्फाले २१ माघमा क्लबलाई पत्र काट्दै २६ गते प्रतिनिधि छनोट कार्यक्रम रहेको बताएको थियो । क्लबले त्यहीअनुसार नै तयारीसमेत गरेका थिए । तर अन्तिम समयमा निर्धारित प्रतिनिधि छनोट नहुने भएको हो ।
एन्फा महासचिव इन्द्रमान तुलाधरले बुधबार बिहान क्लबलाई २८ माघ (शुक्रबार) लाई प्रतिनिधि छनोट कार्यक्रम रहेको पत्र काटेका छन् ।
एन्फा एक सदस्यले भने अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाले आगामी चुनावका लागि बी र सी डिभिजनबाट आफ्नो बहुमत नदेखिएको र मताधिकारसमेत खोसिने हुँदा निर्धारित समयमा चुनाव नगरेको आरोप लगाए । ‘हामी मंगलबार एन्फामै थियौं । उहाँहरूले भक्तपुरमा सम्बन्धित क्लबसँग बैठक गर्नुभएको रहेछ । आफ्नो बहुमत नदेखिएपछि चुनाव स्थगित गर्नुभयो,’ एन्फा कार्यसमितिका एक सदस्यले भने ।
यसअघि एन्फा चुनावमा ९२ मत खसेको थियो । तर यसपटक भने पाँच जिल्ला गठन नहुँदा कुल ८७ मतका लागि चुनाव हुनेछ । आगामी निर्वाचनमा १४ क्लब रहेका बी र सी डिभजिनबाट क्रमशः ११ र ९ प्रतिनिधि छानिनेछन् । यस्तै ए डिभिजन क्लबबाट भने १४ क्लबले नै मत हाल्नेछन् ।
यता, जिल्लाबाट ४५ मत झर्दा राष्ट्रिय लिगका लागि छनोट भएका चारवटा क्लबले मत अधिकार पाउनेछन् । यस्तै खेलाडी संघ, रेफ्री संघ, प्रशिक्षक संघ र महिला संघबाट चार मत रहनेछ । अध्यक्ष पदका लागि वर्तमान अध्यक्ष शेर्पा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्बाङ नयाँ चार वर्षे कार्यकालका लागि चुनाबी मैदानमा उत्रने छन् ।
स्याङ्जामा ट्रयाक्टरको चक्काले च्यापिदा एक जनाको मृत्यु
पोखरामा जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा ९ जना पक्राउ
गठबन्धन बैठक: बागी उम्मेदवारी फिर्ता गराउन सात बुँदे निर्देशन
सैनिक दिवसमा पोखराका तीन संस्थामा खाद्यान्न सहयोग
नेकपा एसले एमसीसीविरुद्ध आज पोखरामा विरोध प्रदर्शन गर्ने
करेन्ट लागेर एक मजदुरको मृत्यु, अर्का एक घाइते
बृषेश चन्द्रलालले लोसपा छाडे, पुनः दर्ता भएको तमलोपामार्फत…
आफ्नै घर बनेपछी रामपुकारको खुसी: बितेको ४ बर्षसम्म खेपेका…
मोहन बैद्य भन्छनः एमसीसीमा एमाले र माओवादीको मौन समर्थन…
मन्त्रालयको काम बुटवलमा, तर प्रदेश स्थापना दिवस दाङमा मनाउँदै…
By गण्डकी खबर / २ चैत्र २०७७, सोमबार १५:२५ /2Comments
पर्यटकीय नगरी पोखरा नजिकै पुम्दि-भूम्दिमा अवस्थित १०८ फिट अग्लो शिवको मूर्ति यस्तो बन्यो
By गण्डकी खबर / ११ असार २०७८, शुक्रबार ११:०५ /0Comments
पोखरा १७ बिरौटामा ढोकाको चुकुल फोरेर दुई पसलबाट ३ लाख बढीको रक्सी तथा नगद चोरी
By गण्डकी खबर / ७ श्रावण २०७८, बिहीबार १५:१२ /0Comments
गाई फार्ममा थुनेर २० वर्षीय युवकको खुकुरी प्रहार गरी विभत्स हत्या
By गण्डकी खबर / ३ बैशाख २०७८, शुक्रबार ०६:०५ /0Comments
पुराना सुनका गहना लोप हँुदै
By गण्डकी खबर / १८ माघ २०७७, आईतवार १३:२१ /0Comments
आइतवारवाट सर्वोच्च अदालतको सबै सेवा सञ्चालन हुने
ओलीसमक्ष प्रचण्डको प्रस्तावः निर्वाचन पछि एमसीसी पारित गर्न अमेरिकालाई भनौं
सर्वोच्च न्यायाधीस जनताबाट न्याय प्राप्त गर्ने अभियानको सुरुवात वैशाख ३०…
धुलिखेलमा राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष र प्रदेश सभाका उपसभामुखबीच अन्तरक्रिया
प्रदेश १, बागमती र गण्डकीका पहाडी क्षेत्रमा वर्षाकाे सम्भावना, हिमपात पनि…
Tel : 9856021315
© 2022 - Gandaki Khabar. All Rights Reserved.
सिटीको सहज जित, टोटनहम पराजित
सागरको गहिराइमा निराजन र एलिसाको जोडी